Ndi SEO na enye aka ime ka ego di nma? Azịza site na ọkachamara dị elu
Azịza dị mfe maka nke a bụ na ọ na-enyere aka nyochaa saịtị ahụ site na ndị na-ege ntị na-eche. Imirikiti ndị mmadụ na-achọpụta ngwaahịa na ọrụ ha na-achọ online site na ịjụ ajụjụ na engines ọchụchọ . Ya mere, ọ bụrụ na otu na-agbaso njirisi ọchụchọ ahụ, ebe nrụọrụ weebụ ahụ gosipụtara na ndepụta nke nsonaazụ. E nwere ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi na-ere ahịa ahụ site n'iji ozi ịntanetị, mgbasa ozi ọha na eze, na mgbasa ozi site na TV ma ọ bụ redio. Ihe dị iche nke SEO site na ụdị ahịa ndị ọzọ bụ na onye nwe ụlọ ebe ahụ na-agbasa ozi na ọrụ ha na ndị na-achọ ha - additional purchase required. Ọzọkwa, SEO na-enye ohere ka ndị na-eleta anya na-achịkwa ihe ha na-achọta, ihe ha chọrọ, na mgbe ha chọrọ ya.
N'agbanyeghị ndị ọkachamara na-azọrọ na ọ dịghị nkwa ọbụla na-abịa SEO, ọ dị mkpa itinye aka na onye ahịa SEO dịka ọ na - eme ka ohere nke ịga nke ọma na mma ROI.
Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na otu onye chọrọ ọrụ na onye na-azụ ahịa, ma ọ bụ were onye ọrụ SEO ọrụ, Alexander Peresunko, Onye Ọrụ Success Manager nke Semalt , na - akọwa ihe ị ga - eche maka:
1. Ahụ aka na-enye aka maka Ịrụ Ọrụ nke Ọma
Ugbu a, e nwere ọtụtụ ndị nọ n'ahịa na-asụ ma ọ bụ ghọta asụsụ SEO. Ka o sina dị, ọ dịghị usoro ọ bụla a kwadoro ma ọ bụ usoro a ghọtara iji chọpụta ma mmadụ ọ dị mma na SEO dị ka ha na-ekwu. Onye nwere ike iji ohere ịjụ nwa akwukwo nke ihe atụ nke ugbu a, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị gara aga na-achọ ịnye ndị na-ere ihe. Na njedebe, ụlọ ọrụ ahụ ejedebe na onye mere SEO ọtụtụ ugboro, ọ bụghịkwa ndị na-azọrọ na ha maara otú ha ga - esi mee ya.
2. Jack nke ndị ahịa niile ahia
Ndị ahịa na-achọ ịdị mpako na ha bụ ọkachamara na ihe niile gụnyere ahịa dijitalụ . Karịa karịa, ọtụtụ ọkachamara SEO nwere àgwà a Ọ dị ka nke a, ụlọ ọrụ ga-ahụ na ọ bara uru inwe onye nwere ọtụtụ ọrụ na ahịa dijitalụ, dị oké ọnụ ahịa nye ha. Ọ bụrụ na ị na-azụ onye maka otu niche nke SEO marketing , ọ ga-abụ eji nlezianya na-akwụ onye na-elekwasị anya na ya ebe ọ bụ na ha ga-enwekwu aka n'ịhụ kpọmkwem ihe onye nwe ụlọ chọrọ iji mezuo.
3. Ndị ọkachamara na-enye onyinye
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara onwe ha kwusara ndị ọkachamara na-agwa ndị ahịa na enweghi nkwa ọ bụla mgbe iji SEO. Ọ bụ eziokwu n'echiche nkịtị ebe ọ bụ na ịntanetị nwere ike mechie, ma ọ bụ search engines na-apụ n'anya. Ka o sina dị, ndị a agaghị adị mfe. Ewezụga oge ndị dị ka ndị a, e nwere ọtụtụ ihe mere ọkachamara ga-eji nwee atụmanya dị mma ma kwenye n'aka ndị ahịa ha. Dị ka ndị dị otú a, mgbe ị na-achọ onye na-azụ ahịa, na-arụ ọrụ na onye dị njikere ime dịka ha chọrọ ka ejiri ego ahụ nweta ụgwọ.
4. Dabere na echiche ndị ọzọ na nkọwa
Ihe kachasị njọ mmadụ nwere ike ime bụ ịnya onye na-ere ahịa nke dabere na ndị ndú eche echiche. Ọ bụghị na ha abaghị uru, ọ bụ naanị ndị nwe ha kwesịrị ịnọ na-akpachara anya. Ebe ọ bụ na ngwá ọrụ na ihe onwunwe dị oke iji kọwaa ụzọ kachasị mma isi wepụ mkpụrụ okwu ọ bụla, ọ bụ ihe na-abaghị uru ịdabere na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na eziokwu dị.
Adịghị edozi maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ọkachamara mgbe ọ bịara SEO. Ọ bụrụ na mmadụ enweghị ike imeli ha, chọzie usoro aghụghọ ahia dị ọnụ ala karịa. SEO na-eweghachite alaghachi ma ọ bụrụ na enyere oge. Cheta ihe anọ dị n'elu mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ihe.